एक सय चार वर्षकी बृद्धाले जितिन को’रोना, घरमै बसेर निको हुने यस्तो र’हस्य – Sanchar Patrika
एक सय चार वर्षकी बृद्धाले जितिन को’रोना, घरमै बसेर निको हुने यस्तो र’हस्य
July 13, 2020 212
२९ असार, काठमाडौंः एक सय चार वर्षिया बृद्धाले को’रोना भा’इरसको सं’क्रमणबाट मुक्त भएकी छिन् । इग्ङल्याण्डको केन्टमा बस्ने ग्रेस ग्रिनउड नामकी एक सय चार वर्षिया महिलाले आफ्नो घरैमा बसेर को’रोना भा’इरसको सं’क्रमणलाई जितेकी हुन् । उनलाई तीन साता अघिबाट को’रोनाले निकै ग’म्भिर असर गरेको थियो । आफ्नो ओछ्यानबाट उठन पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेकी ग्रिनउड अस्पताल भने गइनन् । उनले आफ्नाृे घरमै बसेर पूर्ण रुपमा निको भएको बताएकी छिन् ।
परिवारका अनुसार केही हप्ता अघिबाट उनमा को’रोना भा’इरसको लक्षण देखा परेका थिए । तर, को’रोना सं’क्रमण भएको थाहा पाउँदा पनि बृद्धा आत्तिइनन् । उनी आत्मविश्वासी भएकाले को’रोनालाई जित्न सफल भएको उनको परिवारले बताएको छ ।
अर्को समाचार ,समा ५ लाख १ हजार ६१ जनाले को’रोनालाई जितेर घर फर्के : काठमाडौं – विश्वभर म’हामारीको रुप धारण गरिरहेको को’रोना भा’इरसको सं’क्रमण रुसमा पनि तिब्र गतिमा फैलिइरहेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म रुसमा ७ लाख २७ हजारभन्दा बढी मानिस सं’क्रमित भएका छन् ।
वल्डोमिर्टसका अनुसार रुसमा यो समाचार तयार पार्दासम्म पछिल्लो २४ घण्टामा १३० जनाको नि’धन भएको छ भने कुल मृ’त्यु संख्या ११ हजार ३३५ पुगेको छ ।त्यस्तै रुसमा अहिलेसम्म २ लाख १४ हजार ७६६ जनाको उपचार भइरहेको छ भने ५ लाख १ हजार ६१ जना निको भएर घर फर्केको छन् ।
उनका अनुसार यस प्रकारका मानसिक रो’गबाट बच्न १० बजे सम्मको समयसीमा तोक्न आवश्यक छ । मानिसहरुले त्यसभन्दा पछाडि मोबाइल चलाउनमा रोक लगाए समस्या धेरै कम हुने उनको भनाइ छ । विशेषगरी शहरमा चौबीसै घण्टा बत्तीको मुनि बस्ने मानिसहरुका लागि मोबाइलको अधिक प्रयोगले ग’म्भीर स’मस्या निम्त्याउने गरेको पाइन्छ ।
Prevरुसले पत्ता लगायो कोरोनाको खोपको, कहिले आउला नेपालमा ?
Nextहरेक दिन बिहान गर्नुहोस यस्ता योगासन, फेरिनेछ अनुहारको रुप हुन्छ यस्तो चमत्कार !
प्लाष्टिकमा पोको पारेको फालेको अवस्थामा नवजात शिशुको श’व भेटियो